Doodo waaweyn oo ka dhashay sifo uu ku sheegay madaxdii dalka kaga horreysay Ra’isul Wasaare Kheyre? – Somali Top News
Doodo waaweyn oo ka dhashay sifo uu ku sheegay madaxdii dalka kaga horreysay Ra’isul Wasaare Kheyre?
November 9, 2019 Somali Top News	0 Comments Doodo waaweyn oo ka dhashay sifo uu ku sheegay madaxdii dalka kaga horreysay Ra’isul Wasaare Kheyre?
Khayre ayaa sheegay in markii isaga iyo Madaxweyne Farmaajo ay la wareegeen xafiiska ay u yimaadeen hab dhaqan siyaasadeed oo aad u xun, islamarkaana ka duwan hab dhaqanka siyasaadeed ee ka jira caalamka.
Sidoo kale wuxuu tilmaamay in xilligaasi la aaminsanaa in siyaasadda lagu raado dan gaar, laguna lunsado dhaqaale, sida uu hadalka u dhigay.
“Waxaan u nimid dhaqan ah in la aaminsan yahay inay siyaasadu tahay wax dan gar ah lagu raadsado, halkan waxaan ugu nimid dhaqan la yiraahdo aan siyaasi noqdo, si aan wax u helo ” ayuu yiri Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, Mudane Xasan Cali Khayre.
Waxa kale oo uu Ra’iisul wasaaruhu sheegay inay ceeb aheyd in la’isla xisaabtamo, iyo in la wada shaqeeyo, si loo hormariyo dalka.
Ugu dambeyn wuxuu tilmaamay in dhammaan ay bedaleen hab dhaqankaasi, islamarkaana laga gudbay dhibaatooyinkii jiray, haatana dowladda Soomaaliya ay la qjaan aadeyso siyaasad ahaan dowladaha asaageeda ee ka jira dalalka caalamka.
Hadalkan ayaa ku soo aadaya, iyadoo maalmihii dambe madaxda dowladda ay eedeymo xoogan kala kulmayeen Madaxweynayaashii hore, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed, waxaana aad looga hadal hayaa baraha bulshada.
← Itoobiya oo ku adkeysaneysa dhismaha Biyo xireenka Nile
Puntland:- Majirto Ciidamo laga qoray Mudug oo ay leedahay Dowladda Soomaaliya →
Wasaaradda Ganacsiga Soomaaliya oo mamnuuceysa badeecadaha qaar
October 29, 2018 Somali Top News 0
AMISOM oo sheegtay in ay wax ka qabaneyso askareynat caruurta ee Al shabaab oo korotay
Ciidamada Xoogga Dalka oo dib u habeyn lagu sameyn doono